Ogaden News Agency (ONA) – Shir aan loo kala hadhin ayna Kasoo Qaybgaleen Wufuud sare oo ka socda JWXO oo ka Dhacay dalka Denmark.
Shir aan loo kala hadhin ayna Kasoo Qaybgaleen Wufuud sare oo ka socda JWXO oo ka Dhacay dalka Denmark.
Posted by maamule1	/ June 4, 2011
Maanta oo ay taariikhdu ahayd 04/06/2011 o ayaa waxaa kadhacay wadanka denmark shir aan loo kala hadhin oo ay soo qaban qaabisay jaaliyada soomaalida ogadeenya ee dalka denmark ayna kasoo qaybgaleen wafti sare oo kasocda jabhada wadaniga xoraynta ogaadeenya. Shirka oo indhawalaadaba laga shintirinaayaya ayaa la isku waydaarsanayay warbixino waafi ah ayna oogu horayso Wax qabadka Jaaliyada Ogadeeniya ee Danmark. Aayado Quraana oo uu soo jeediyay Sheekh Illeeye kadib waxaa laguda galay Ajandihii shirka waxaana Lagusoo dhoweeyay codbaahiyaha Gudoomiyaha Jaaliyada Denmark Mudane Xasan Macalin oo Ka hadlay taariikhda jaaliyada iyo Wax qabadka jaaliyada Ogaadeenya ee Danmark. Waxaa markaas kadib lagusoo dhoweeyay Codbaahiyaha Hogaanka Arimaha bulshada & abaabulka jwxo Mudane Maxamed Cabdi Yaasiin (Diirane oo si wanaagsan ugu turxaan bixiyay bulshadii kasoo qaybgashay shirka halganka ogadeenya kasocda una cadeeyay halganka Ogaadeeiya ka socda in uu yahay mid xaq ah.
Waxaa uuna dhahay ” Jihaadka Halganka Ogaadeniya waa Jihaad sideedabana jihaadku waxuu ukala baxaa Fardul cayn iyo Fardul Kifaaya. Fardul cay waa waxii waajib ku ah qofkasta inuu Fuliyo oo ah waajib sida salaada oo kale hadaba, fardul kifaayana waa waxii ah waa wax aan waajib inagu ahay oo waajib nimadiisii ay inaga qaadeen qayb dadka kamida” waxaa kaloo lagusoo dhoweeyay Codbaahiyaha Gudoomiye kuxigeenka Jabhada wadaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) Mudane Maxamed Ismaaciil oo dulmar kusameeyay Taariikhda Halganka Ogaadeenya, Isla mar ahaantaana Ka hadlay Heerarkii ama marxaladihii kala duwanaa ee uu halganku soomaray, heeraka maanta marayo iyo siyaasada Cadawgeena Ethiopia isku dayga iyo jilaafooyinka ay udhigayso Halganka ay majaraha u hayso JABHADA WADANIGA XORAYNTA OGADEENIYA (JWXO).
Waxaa kaloo uu soo qaata y Dhibaatada uu Gumaystaha Ethiopia uu kuhayo dalka somaalida iyo sidayna Marnaba Ethiopia raali ooga ahayn inay soomaaliya Lugaheeda Isku taagto. Ethiopia oo adeegsanaysa Shakhsiyaad calooshood ushaqaytayaal ah oo aan daniyo muraad toona kalahayn umada soomaaliyeed uu lugaha u haya soomaaliya horna taagan yihin xasiloonida iyo midnimada dalka soomaaliya. Waxaa madasha ka hadlay marti sharaf badan oo ay ka mid ahaayeen Mudane C/Risaaq, mudane Dr Ducaale oo ka hadlay Cadaawda iyo Nacaybka ay Ethiopia U hayso Soomaali meel kasta oo ay kusugan tahay & Marwo Dr Istaahil xirsi oo ka hadashay kaalinta ay kulleeyihiin dumarka Halganka iyo inay yihiin lafdhabarta Umada. Gaba Gabadii shirka waxaa Lagu soo gaba gabeeyay Su’aalihii Loohayay Madaxda JWXO ee madasha ku sugnaa oo si wanaagsan loogu bayaamiyay waxyaabahii uu maanka dadwaynuhu tabayay. Shirku ayaa kudhamaaday si dagan oo ay kamuuqato farxad iyo rayn rayn. Shacabkii shirka kasoo qayb galayna ayagoo maqsuud ah ayey kabaxeen meesha.